Mogadishu Journal » Dybala ayaa ka maqnaan doona xulka Argentina isreebreebka Koobka Adduunka ee soo socda
Paulo Dybala ayaa seegay labadii kulan ee furitaanka isreebreebka Koobka Adduunka ee Argentina waxaana ciyaaryahanka Juventus haatan laga reebay kulamada bishaan.
Weeraryahanka kooxda Juventus Paulo Dybala ayaa laga saaray xulka Argentina ee isreebreebka Koobka Adduunka ee soo socda.
26 jirkaan ayaa bedel lagu keenay 14kii daqiiqo ee ugu danbeysay kulankii ay Juve barbaraha 1-1 la gashay Lazio axadii laakiin waxaa loo arkaa inuusan taam u aheyn inuu la ciyaaro xulkiisa.
Waxa uu seegay labadii kulan ee ugu horeysay ee isreebreebka ee Argentina bishii October - guulihii ay ka gaareen Ecuador iyo Bolivia - haatan wax qeyb ah kama ciyaari doono Paraguay iyo Peru labada isbuuc ee soo socota.
Argentina ayaa bayaan ay soo saartay axadii ku xaqiijisay in Dybala uu soo bandhigayo astaamo guud oo hidde ahaan u baahan nasasho iyo qiimeyn.
Dybala ayaa lix kulan u saftay Juventus tartamada oo dhan xilli ciyaareedkan, waxaana uu dhaliyay goolkiisii ​​kaliya ee isbuucii hore ee ay 4-1 kaga badiyeen Ferencvaros Champions League.
Daafaca Ajax Lisandro Lopez ayaa lagu soo daray liiska 25ka ciyaaryahan ee Lionel Scaloni, oo ay sidoo kale ku jiraan xidigo ay ka mid yihiin Lionel Messi iyo Angel Di Maria.